Guddoomiye Jawaari oo shir guddoomiyay kulankii guddiga joogtada Golaha Shacabka
Sagal Radio Services • News Report • March 30, 2018
Guddoomiyaha Golaha shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa galabta shir guddoomiyay kulankii Guddiyada Joogta Golaha, iyadoo kulanka looga hadlayay sidii dib loogu bilaabi lahaa howlaha caadiga ahaa ee fadhiyada Baarlamaanka.
Iyadoo maalinta berri ah la filayo in Golaha Wasiirada magacaaban ee Ra’iisul Wasaare Cumar C/rashiid la horgeeyo Baarlamaanka Soomaaliya, si codka kalsoonida loogu qaado ayaa waxaa soo baxaya warar sheegaya in kulanka berri aanu shir gudoomin doonin Gudoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Prof. Maxamed Sheekh Cusmaan ayaa sheegay in dastuurka dalka u yaalla aanay aheyn KMG, isagoo xusay in dad badan ay wax isaga qaldan yihiin.
Gudoomiyaha Baarlamaanka oo maanta la kulmayo wakiilo uu ka mid yahay Nicholas Kay
Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Prof. Maxamed Sheekh Cismaan (Jawaari) ayaa maanta lagu wadaa inuu xafiiskiisa kula kulmo Wakiilo ka socda Beesha Caalamka, iyadoo uu jiro cadaadis caalami ah oo ku aadan sidii loo soo afjari lahaa xiisadaha siyaasadeed ee uu dalku galay.
Prof Jawaaro Oo Jawaab kulul Ka Bixiyey War Been Abuur Ay Saxaafadda Qaarkood ka sameeyeen.
Gudoomiyaha Golaha Shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa jawaab ka bixiyey hadal been abuur ah oo si qaldan loo kala jaray kaasi oo lagu baahiyey shabakadaha Internetka.
Gudoomiye Jawaari oo ka hadlay weerarkii Maanta lagu qaaday Xarunta Baarlamaanka
Guddoomiyaha baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ahna kusimaha Madaxweynaha dalka Mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya Uga mahad Celiyay sida ay u bad baadiyeen Xildhibaanada ugana Hortageen Weerarkii Maanta al shabaab ku soo qaadeen Xarunta Golaha shacabka .
Gudoomiyaha Barlamaanka oo sheegay in loo baahan yahay inta waqtiga ka hortay dalka lagu gaarsiiyo doorasho.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Prof. Maxamed Sheekh Cismaan (Jawaari) ayaa ka qeyb galay kulan Gudiga Baarlamaanka u qaabilsan Dastuurka iyo Hiigsiga doorashada sanadka 2016 ay ku dooranayeen Gudoomiye iyo Gudoomiye kuxigeen, iyadoo gudigan uu dhowaan si rasmi u howl geli doono.
Wafdi Uu Hogaaminayo Gudoomiyaha Baarlamaanka Oo Gaaray Magaalda Rome ee Dalka Talyaaniga “SAWIRRO”
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari iyo wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Rome ee caasimadda dalka Talyaaniga.
Madaxda baarlamaanada Soomaaliya iyo Kenya oo kulan ku yeeshay dalka Kenya.
Afhayeenka golaha shacabka ahna guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo uu wehliyo ku-xigeenkiisa labaad Mahad Cabdalla Cawad ayaa kulamo la qaatay guddoomiyaha baarlamaanka dalka Kenya Justin Muturi iyo xubno ka mid ah baarlamaanka dalka Kenya.